ကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်းများ Home | 24 Naryee
ကွန်ပျူတာဆက်စပ်ပစ္စည်းများ / 1 -6၏6စာရင်းပြုစုခြင်း
hoco.အမှတ်တံဆိပ် Power bank
hoco.အမှတ်တံဆိပ် Power bank များကို ၂၄နာရီတွင် လွယ်ကူစွာ စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ် ဝယ်ယူနိုင်ပြီနော်! အမျိုးအစားနဲ့ ဈေးနှုန်းလေးတွေ အသေးစိတ်သိရှိလိုလျှင် ဖုန်းလေးဆက်ပြီး စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်! Ph:09456315508,09456315509
Portable HDD (USB 3.0) (Rugged Series)
Data အမြောက်အမြားကို သိမ်းဆည်းနိုင်သည့်အပြင် မိမိသွားလိုရာ လွယ်ကူစွာ သယ်ဆောင်သွားနိုင်သည့် အရည်အသွေးကောင်းမွန်သော Transcend Portable HDD (USB 3.0) (Rugged Series) များကို ၂၄ နာရီတွင် လွယ်ကူစွာဖြင့် စိတ်ကြိုက် ရွေးချယ် ၀ယ်ယူနိုင်ပြီနော်..... ဈေးနှုန်း...
MacOS Sierra Software Bootable Stick
macOS Sierra Software Bootable Stick - မြန်မာ iMac software update အလွယ်တကူ လုပ်နိုင်တဲ့ bootable stick ..
South Okkalapa (မြောက်ဥက္ကလာပ) (Yangon (ရန်ကုန်))
လူကြီးမင်းတို့၏လုပ်​ငန်းတွင်​အသုံးပြု​နေ​သော Copier'Printer'Scannerအတွက်​ကျွန်​​တော်​တို့ Great Star Engineering Group မှအစစအရာရာတာဝန်​ယူပါရ​စေ 0973231053/09964693939/09259393913
Copier Service & Toner
လူကြီးမင်းတို့လုပ်​ငန်းတွင်​သုံးပြု​နေ​သောCopier Printer Scanner များကိုလူကြီးမင်းတို့စိတ်​​တိုင်း ကျ​ရောင်းဝယ်​ငှားပြု ပြင်​​ပေးပါသည်​ Great Star Engineering Group 09259393913/09964693939/0973231053
29000.00 Kyat Ks
Tile Beauty Line
(1) Tile beauty Line ကတော့ ညစ်ပတ်ပြီးပေကျံနေတဲ့ ကြွေပြားလိုင်းတွေကို အဖြူရောင် Coating ပေးတဲ့ပစ္စည်းလေးဖြစ်ပါတယ် (2) Tile Beauty Line နဲ့ Coating ပေးလိုက်ခြင်းဖြင့် ကြွေပြားလိုင်းကြားများအတွင်း ညစ်ပတ်ပေကျံခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ် (3) အသုံးပြုနည်း-...